Ihe mgbagwoju anya FNF – Egwu Agha Akụkọ Akụkọ Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Ihe mgbagwoju anya FNF – Egwu Agha Akụkọ Akụkọ Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na Editor | Septemba 28, 2021
Enyi nwoke bụ nwa okorobịa nwere oke mmasị 🧑🏻‍🦱 onye na -arọ nrọ ịghọ onye na -eri nri, ọ hụkwara enyi nwanyị n'anya nke ukwuu – nwa agbọghọ na -atọ ụtọ nke nwere ogologo ntutu isi ọ👩🏻‍🦰ụ👩🏻‍🦰.
Enyi nwanyị na -enwe mmasị enyi nwoke, mana ọ na -eche na Enyi nwoke nwere ike ime nke ọma, na ọ chọrọ ịma ya aka n'akwụkwọ ise egwuregwu mgbagwoju anya ka ịmatakwu gbasara onwe gị. Ọbụna karịa, Enyi ga -emeri ọgụ rap ihe ịma aka 🎤🎵 iji nweta isi n'aka nna nwa agbọghọ ahụ na ndị ezinụlọ ya. Enyi nwoke achọghị ịda mba mana ọ na -agbasi mbọ ike imezu nrọ ya. Kedu ihe ọ ga -eme iji nweta nwa agbọghọ nrọ ya?
Ebumnuche gị bụ idozi nsogbu Ihe mgbagwoju anya FNF ma nyere di na nwunye aka n'akụkụ niile nke akụkọ ịhụnanya ha. Mee ya ọchị 👏🏻, bụrụ enyi ya 👋🏻, ma ọ bụ gwa ya ihe nzuzo gị 💬🧏🏻‍♂️, ị kpọrọ ya aha! Nkpughe: Chọta onye nwe ya wee chọọ "ihe" iji nyere ML aka iru ebumnuche ya.
Egwuregwu eserese jikọtara ya na egwuregwu mgbagwoju anya na ọgụ egwu FNF
Mmmmmmmmmm 100+ ọkwa iji akụkọ eserese doro anya chọpụta
Egwuregwu egwuregwu na -eju afọ iji mee ka ihe okike na echiche gị rụọ ọrụ
Game Egwuregwu na -atọ ụtọ maka afọ niile nwere ihe ịtụnanya na ọkwa ọ bụla
⭐️ See akụkụ ahụ na -efu ma nwee mmetụta nke egwuregwu Fraịde Night Draw
Chọpụta ụdị eserese ma jiri echiche gị see otu akụkụ 🖌 iji dozie egwuregwu egwu egwu FNF. Ị ga -achọta akụkụ ahụ furu efu, nyere enyi nwoke aka ịmụta rap ma merie ọgụ egwu 🏆 iji nweta ịhụnanya ndụ ya. Chee echiche na mpụga igbe wee nwaa ụzọ dị iche iche ruo mgbe ị nwetara azịza ziri ezi wee mafee ọkwa ahụ. Atụmatụ: Jiri 💡 ndumodu iji nyere gị aka ịgafe egwuregwu mgbagwoju anya ugbu a.
Ogologo oge ole ka ị chere na enyi nwoke nwere ike nweta ịhụnanya nke ndụ ya? Buli n'ime egwuregwu wee chọta azịza maka onwe gị! Download ihe Egwuregwu FNF Draw n'efu ugbu a!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Battle, CheatsHack, Draw, fnf, LIFE, Egwu, Ihe mgbagwoju anya, Akụkọ
← Otu egwuregwu bọọlụ Elite – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Concordia: Nbipụta Dijitalụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →